Ngaba ukhona uThixo? Kutheni Umele Uyihoye Nje Loo Nto?
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISilozi ISpanish Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiBengali IsiBhulu IsiBulgarian IsiCebuano IsiChichewa IsiChitonga IsiCibemba IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFiji IsiFinnish IsiFrentshi IsiGeorgia IsiGrike IsiGujarati IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHindi IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKannada IsiKikaonde IsiKikuyu IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKorea IsiLingala IsiLithuania IsiLuvale IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMalayalam IsiMarathi IsiMyanmar IsiNepali IsiNgesi IsiNorway IsiPhuthukezi IsiPolish IsiPunjabi IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwahili (saseCongo) IsiSwedish IsiTagalog IsiTamil IsiTelugu IsiThai IsiTigrinya IsiTok Pisin IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTwi IsiUkrainian IsiVietnam IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu isi-Igbo
Umbuzo wokuba uThixo ukho ubonakala ungenampendulo okanye ungabalulekanga kwabaninzi. UHervé, owakhulela eFrance uthi: “Anditsho ukuba akekho uThixo, kodwa mna andilokholwa. Mna ndithi kungcono umntu asebenzise ingqondo yakhe. Leyo into ayifuni nokuba ukholwe kuthixo othile.”
Kusenokwenzeka ukuba abanye bafana noJohn waseMerika. Uthi: “Ndakhuliswa ngabazali abangakholelwayo kuThixo. Ukukhula kwam, ndandingazi kwanto ngobukho bukaThixo. Sekunjalo, ndandikhe ndizibuze ngaye.”
Ngaba wakhe wazibuza ukuba ukhona uThixo nokuba ubomi buphele apha? Mhlawumbi ukhe wazibona izinto ezenza kucace ukuba ukhona uMdali, njengokumangalisa kwendlela elenziwe ngayo ikhaya lethu ukuze sonke siphile, nezinto eziphilayo ekungenakwenzeka ukuba zasuka nje zazivelela.—Funda ibhokisi ethi “ Hlolisisa Ubungqina.”
Qwalasela indlela ezibaluleke ngayo ezi ngongoma zichazwe ngasentla. Zifana nendlela ekusa ngqo kubutyebi. Ukuba unokufumana ubungqina nenkcazelo onokuyithemba yokuba uThixo ukhona, uya kungenelwa kakhulu. Nantsi imizekelo emine.
1. KUTHENI SIPHILA?
Ukuba ubomi bunenjongo, sifuna ukuyazi, nokuba singena phi thina kuyo. Ngapha koko, ukuba uThixo ukhona ibe asinalwazi ngaloo nto, siya kube siphila ngaphandle kokwazi eyona nto ibalulekileyo kwindalo yonke.
IBhayibhile ithi yonke into ephilayo idalwe nguThixo. (ISityhilelo 4:11) Kusinceda ngantoni ukwazi oku? Khawuve oko kufundiswa yiBhayibhile.
Abantu bohlukile kuzo zonke izidalwa ezisemhlabeni. IBhayibhile ithi, uThixo wasidala safana naye ukuze sibe neempawu ezifana nezakhe. (Genesis 1:27) Ngapha koko, iBhayibhile isifundisa ukuba abantu banokuba ngabahlobo bakaThixo. (Yakobi 2:23) Ayikho enye into ebhetele esinokuyiphilela ngaphandle kokuba nobuhlobo noMdali wethu.
Kuthetha ukuthini ukuba ngumhlobo kaThixo? Abahlobo bakaThixo banokuthetha ngqo naye. Yena uthembisa ukuba uya kubaphulaphula aze abancede. (INdumiso 91:15) Xa singabahlobo bakaThixo siye sazi indlela azibona ngayo izinto. Le nto inokusenza siqonde neempendulo zeyona mibuzo inzima ebomini.
Ukuba uThixo ukhona ibe asinalwazi ngaloo nto, siya kube siphila ngaphandle kokwazi eyona nto ibalulekileyo kwindalo yonke
2. UKUBA NOXOLO
Ngokomzekelo, abanye abakholelwa kuThixo ngenxa yeentlungu ezisehlabathini. Bathi, ‘Kutheni uMdali onamandla evumela intlungu nobubi?’
Impendulo yeBhayibhile iyathuthuzela kuba ithi kwakungeyonjongo kaThixo ukuba abantu baxhwaleke. Ukudalwa kwabo nguThixo, abantu babephila ubomi obungenazintlungu. Phofu nokufa oko kwakungazi kubakho. (Genesis 2:7-9, 15-17) Ngaba yintsomi emini le? Tu kanti! Kaloku ukuba kukho uMdali onamandla nonothando ngaphezu kwayo nantoni na enye, besiya kulindela ukuba afune baphile ubomi obunje kanye abantu.
Bangena njani abantu kobu bugxwayiba bakubo? IBhayibhile ithi uThixo wabadala abantu banenkululeko yokuzikhethela. Abantu abazizo iimatshini, yaye abanyanzelwa ukuba bathobele uThixo. UAdam noEva, abazali bethu abazange bafune ukulawulwa nguThixo. Endaweni yoko, becingela iziqu zabo bakhetha ukwenza ukuthanda kwabo. (Genesis 3:1-6, 22-24) Ngenxa yoko, imiphumo ebuhlungu iviwa sithi.
Kunokusenza sixole ukwazi ukuba intlungu esikuyo asiyonjongo kaThixo, ibe ingaphakathi kuthi into yokufuna isiqabu. Siyakufuna ukwazi ukuba izinto ziza kuba bhetele.
Zisuka nje emva kokuvukela kwabantu, uThixo wathembisa ukuba uza kuyizalisekisa injongo yakhe ngomhlaba. Ngenxa yokuba engusomandla, akukho nto inokumthintela ekwenzeni oko. (Isaya 55:11) Kungekudala uThixo uza kuphelisa zonke izinto ezibuhlungu ezibangelwe kukuvukela kuka-Adam noEva, yaye umhlaba nabantu abakuwo baza kuphila ngendlela uThixo awayefuna baphile ngayo kwasekuqaleni.
Kungakunceda njani oku wena? Khawuhlolisise izithembiso ezibini kwezininzi uThixo asithembise zona eBhayibhileni.
UXOLO EMHLABENI WONKE KUNGEKHO BUBI. “Kusele ithutyana, angabikho ongendawo; uya kuyikhangela indawo yakhe, abe engekho. Kodwa abalulamileyo baya kuwudla ilifa umhlaba, baziyolise ngokugqibeleleyo ngobuninzi boxolo.”—INdumiso 37:10, 11.
UKUGULA NOKUFA KUYAKUBE KUPHELISIWE. “Akakho ummi wakhona oya kuthi: ‘Ndiyagula.’” (Isaya 33:24) “Uya kuginya ukufa ngonaphakade, yaye iNkosi enguMongami uYehova ngokuqinisekileyo iya kosula iinyembezi ebusweni bonke.”—Isaya 25:8.
Kutheni sinokuzithemba izithembiso zikaThixo eziseBhayibhileni? Kungenxa yokuba kukho ubungqina beziprofeto ezininzi eziseBhayibhileni esele zizalisekile. Noko ke, ithemba lokukhululeka ekubandezelekeni alibususi ubunzima esikubo ngoku. Luluphi olunye uncedo esilufumana kuThixo?
4. USINCEDA KWIINGXAKI NASEKWENZENI IZIGQIBO
UThixo usinceda sikwazi ukumelana neengxaki esinazo, size senze nezigqibo ezifanelekileyo. Zininzi izigqibo ezingabalulekanga kangako, kodwa ezinye zinemiphumo ehlala ihleli. Akukho mntu unokusinika ubulumko obugqwese obo sibufumana kuMdali wethu. Kuba ebesoloko ekho, uzibona bhetele izinto kunathi ibe ubomi sibuphiwe nguye. Ngoko uyayazi into esiyidingayo.
UYehova uThixo waphefumlela abantu abahlukahlukeneyo ukuba babhale iingcinga zakhe eBhayibhileni. Kuyo sifumana umbhalo othi: “Mna, Yehova, ndinguThixo wakho, Lowo ukufundisa okuyingenelo kuwe, Lowo ukubangela unyathele endleleni ofanele uhambe ngayo.”—Isaya 48:17, 18.
UThixo unamandla angenasiphelo, ibe ufuna ukuwasebenzisa ekuncedeni thina. IBhayibhile imchaza njengobawo onothando ofuna ukusinceda. Ithi: ‘UYihlo osezulwini ubanika umoya oyingcwele abo bamcelayo!’ (Luka 11:13) La mandla avela kuThixo angasikhokela aze asiqinise.
Ungalufumana njani olu ncedo kuThixo? IBhayibhile iyaphendula: “Kuba lowo uzayo kuThixo umele akholwe ukuba ukho nokuba ungumvuzi wabo bamfuna ngenyameko.” (Hebhere 11:6) Ukuze uyamkele into yokuba uThixo ukhona, ufanele uhlolisise ubungqina ngokwakho.
NGABA UZA KUPHANDA?
Ukufunda inyaniso ngoThixo kufuna ixesha, kodwa kuyacaca ukuba kungakunceda. Khawuve la mava kaXiujin Xiao owazalelwa eTshayina kodwa ngoku oseMerika. Uthi: “Nangona ndandikholelwa ukuba izinto zazivelela, ndandisafuna ukwazi ngeBhayibhile. Ngoko ndaye ndafunda iBhayibhile namaNgqina kaYehova. Kunyaka wam wokugqibela eKholeji, ndandingenalo ncam ithuba lokwenza izinto endandizifunda eBhayibhileni. Oko kwandenza andonwaba. Kodwa xa ndazimisela ukufunda iBhayibhile, ndaye ndonwaba.”
Ngaba ungathanda ukufunda okungakumbi ngoMdali wethu, uYehova uThixo? Kutheni ungaziphi ixesha lokukhe uphande?
Ithini IBhayibhile NgoThixo?
Okufundiswa yiBhayibhile ngoThixo kulula kodwa kuxhokonxa iingcinga—yaye kwabanye kuyamangalisa.
UMdali wethu asingomoya njee, kunoko uThixo unobuntu bakhe ibe unegama elinguYehova. *—Isaya 42:8.
UYehova uThixo akanasiqalo yaye akasoze abe nesiphelo.—INdumiso 93:2; Isaya 40:28.
Ezinye iinkonzo zithi uThixo ngumgwebi okhohlakeleyo kodwa akunjalo. Kunoko, olona phawu lwakhe luphambili luthando.—1 Yohane 4:8.
UThixo unomdla ebantwini ibe ubazisile injongo yakhe ngabo.—INtshumayeli 12:13; Mika 6:8.
Ngaba iBhayibhile isichazela yonk’ into ngoThixo? Hayi. IBhayibhile iyatsho ukuba sazi nje ‘imiphetho yeendlela zakhe.’—Yobhi 26:14.
^ isiqe. 36 IiBhayibhile ezininzi zisebenzisa isibizo esithi “NKOSI” ukuguqulela igama lesiHebhere uYHWH, elidla ngokuguqulelwa ngesiNgesi ngokuba “nguYehova” okanye “uYahweh.”
Ezi ncwadi zilandelayo zinobungqina bokuba ukho uMdali okrelekrele.
I-The Origin of Life—Five Questions Worth Asking
Ifumaneka ngelwimi eziyi-47
Kwiphepha 12 ithi: “Imfundiso yokuba izinto zazivelela izama ukucacisa ukuba izinto eziphila emhlabeni azizange zidalwe nguThixo. Sekunjalo, okukhona oososayensi bephanda ngobomi, kokukhona kucaca ukuba ubomi abuzange buthi gqi nje esithubeni.”
Ifumaneka ngelwimi eziyi-80
Kwiphepha 24 ithi: “Abantu abaninzi bathi inzululwazi iyaphikisana nengxelo yeBhayibhile ethi izinto zadalwa. Kodwa ezona zinto zingqubanayo yinzululwazi neenkolelo zabo Baneembono Ezigabadeleyo ngobuKristu.”
Ngaba UThixo Unalo Igama?
UThixo unezibizo ezininzi, ezinye zazo nguSomandla, uMdali nesithi Nkosi. Kodwa igama likaThixo lisetyenziswa ngaphezu kwezihlandlo eziyi-7 000 eBhayibhileni.
Ngaba UThixo Ukho?